iinyaniso malunga Sweden kwaye Swedes amehlo (iifoto) - IVIDIYO INCOKO - EWE!
Ke mna wacinga ukuba nje intetho impediment, kodwa ekubeni emzantsi Afrika ka-Sweden, kwisixeko, ndaqonda ukuba kwaba lelinye dialects. I-Swedes musa zithanda cook ekhaya, ngoko ke baya rhoqo ilungelelanise usapho outing kuba bonke ihlela ka-lovino Ezona ncwadi dish phakathi Swedes ngu (dough, cheese, inyama kwaye okhethekileyo kebab sauce). Kukho kwa kwiwebhusayithi ukuze ityhila pizzerias, apho baya ngalo kakhulu okumnandi lovino kebab. Zonke pizzerias Sweden indawo ngokwabo njengoko exclusively isi-Italian, kodwa ndiya kuba zange kuhlangatyezwana nazo kwi-Italian. Idla oko ke Arabs okanye Kurds. Imo yezentlalo womnatha ezifana Facebook, Swedes idla ukubhala malunga izinto, ngolohlobo, ikhangeleka kakhulu ridiculous kwaye naive. Umzekelo, ubhala:"Tonight iya kuba lovino kunye umfazi kuba unikezelo ye-Idol njengoko elihle."Jikelele, ukubhala bonke momentary iziganeko ebomini. Kuqheleke ukuba bonke sukusebenzisa"lukhuni"amazwi kwi-everyday intetho kwaye rhoqo kungabi ukwazi intsingiselo la mazwi. Kwaye ukuba ufuna ukufunda amazwi ambalwa kwaye intonga kwabo kwisibonelelo, ngoko wonke umntu uza kucinga ukuba ufuna super-knowledgeable abantu. Qaphela ukuba"kunzima"amazwi yi-ukuguqulela nabo kwi-Swedish ulwimi ngala:"RAIDobjectivelysubjectively".
Oko kukuthi amazwi ukuze sibe sebenzisa everyday in life
Mna xa sele iguqulelwe kwi-Swedish ulwimi lwethu esithi:"Free cheese kuphela ngendlela mousetrap"kwaye wathi ke xa wonke umntu kwi company.
Isiphumo waba stunning, wonke umntu waqala ukuba clap, kwaye abanye nkqu ukubhala ifowuni yakhe. Ngoko ke ndaqalisa ukuba flaunt nge-ntetho kuyo yonke indawo. Ukuba ufuna anayithathela kugqitywe ukuqala amashishini kunye kukrazulwa a room, akunjalo elula. Apha yonke into yenziwa chu. Kunye zethu inyathelo nje wobomi (xa kufuneka zonke kanye) ukufumana osetyenziselwa oko akuzi kuba lula. Kanjalo Swedes ingaba kakhulu cherish izilwanyana. Kwakukho meko xa umntu bambulala a Sparrow kwi-ihlathi ukususela obhedu rifles kwaye uqaphele ukuba omnye passers umntu kunikwa iinyanga a penal colony kwaye kulungile. Kwi-Sweden akuvumelekanga olwamkelekileyo emva graduation ukusuka ukuya Ekholejini. Ngesiqhelo, baya kuqala waya kusebenza, kwaye kwangoko - yiya Ngezifundo.
Phezu reaching kweminyaka ulutsha ukuzama ezahlukeneyo ukusuka abazali baze baphile ngokwahlukeneyo, ngenxa yokuba apha ukuwahlawulela phantse wonke umntu.
Endaweni cigarettes, Swedes ikhethe chewing icuba. Chewing icuba yi uhlobo icuba imveliso. Yi crushed emhlabeni ofumileyo icuba nto wabeka phakathi ephezulu (kuyanqaphazekaarely thoba) lip kwaye gum. Ukuba unayo ophunyezwe - probationary xesha waza watyikitywa i-imisebenzi isivumelwano kunye umqeshi, unoxanduva phantse ukwenzeka ukuba yonke imihla, nkqu ukuba awenzanga into baphume ezandleni nokuqheleka ngoko ke olomeleleyo Kwizakhiwo ka-Sweden. I-Swedes ingaba kakhulu uhlobo kwaye eluncedo abantu.
Ukuba unengxaki yokulungisa yenzekile, kwaye emsebenzini ndawufumana malunga nayo, ngoko ke iba yingxaki kuba lonke iqela.
Phantsi kweminyaka engamashumi amabini amazinyo kusenokuba wamanzi acociweyo for free. Uninzi umdla kukuba ungakwazi kwenza idinga phantse rhoqo ngeveki kuba bonke ihlela ka-izizathu, nokuba ukususa ilitye okanye ngokulula ukuba whiten i-amazinyo. I-Swedes avid fishermen. Kodwa babambisa iintlanzi, idla hayi kuba babambisa, kuba isebe lemicimbi yenkcubeko nemidlalo. Ngoko ke, endaweni ke ekhaya kwaye inyibilika a smoker, baya quietly bakhululwe intlanzi emva emanzini, ngaphambili photographed kunye naye. Endleleni, ulwimilanguage, baya musa jonga edible intlanzi, disdain. Ngoko ke ndiza kusoloko ekhohlo ne enkulu, babambisa. Ukususela ngomvulo ukuya ngolwesihlanu uza ayinakufumana kwi street antonio abantu. Kwaye ukuba niya kuhlangana, ngoko ke, kuya kuba abanye alcoholic (apho kwi-Sweden ezimbalwa). Kodwa ukususela ngolwesihlanu ukuba icawe, antonio kwi street ipesenti. Kwi-Sweden, utywala ngu controlled ndathengisa exclusively yi-state. Musa ngalo utywala ukuze abantu phantsi iminyaka. Kanjalo ukuba uya kuza phinda-phinda kathathu kwi ngenye imini, uya mhlawumbi walile ukuthenga, ocacisa ukuba"usondele kakhulu rhoqo"ukususela urhulumente elawula ukusetyenziswa kwamanzi ka-utywala. Kuba imbali, omnye utywala store yenzelwe kuba amawaka abahlali, xa sifumana isinye intente kunye booze alungiselelwe abantu. Kwaye vumelani thina, ngoko, hayi kuvavanya ukuba ayinjalo genocide.
Kwi-apartment izindlu akuvumelekanga nomthetho ukuba ingaba eyakho ukuhlamba umatshini.
Oku kubangelwa ukuba izindlu TSZH kukho othile Laundry igumbi apho yi-ukuqeshwa uyakwazi ukuhlamba, omile kwaye umhlambi linen. Oku kwenziwa ukugcina amandla. Le ncwadi dish ka-Swedes ngu (dough, cheese, inyama kwaye okhethekileyo kebab sauce). Kukho kwa kwiwebhusayithi ukuze ityhila pizzerias, apho baya ngalo kakhulu okumnandi lovino kebab.
Ulwazi kwi-Kzil umkhosi kuba ezinzima budlelwane ngaphandle
దగ్గిర ఒక వ్యక్తి లేదా ఒక మహిళ నుంచి నార్వే, స్వీడన్, ఫిన్లాండ్ స్త్రీ డేటింగ్, డేటింగ్, ఫిన్లాండ్ డేటింగ్
ikhangela umntu kuba ezinzima budlelwane ividiyo incoko ngaphandle ubhaliso kwaye free ividiyo incoko ngaphandle ubhaliso ukuphila umsinga guy free ividiyo acquaintance ngaphandle nokubhalisa ne-girls ividiyo Dating site free ividiyo incoko amagumbi-intanethi elungele iintlanganiso esisicwangciso-mibuzo roulette dibanisa Dating guys ividiyo